January 27, 2015 - 3:24 PM News Code : 667507 Source : al Mustafa
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် မှ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် တောင်ပိုင်းနေ လူငယ်လူရွယ် များ အားလုံး သို့ ပေးသည့် စာ
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် မှ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် တောင်ပိုင်းနေ လူငယ်လူရွယ် များ အားလုံး သို့ ပေးခဲ့သည့် စာ
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ် ဟဇရသ် အာယာသွလ္လာဟ် အလ်အွဇ်မာ ဆရက်ဒ် အလီခါမေနာအီ မှ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန် တောင်ပိုင်းနေ လူငယ်လူရွယ်များ သို့ စာတစ်စောင် ရေးသားသီးကုံး ခဲ့ပါသည်။အာယာသွလ္လာဟ်ကြီး အနေဖြင့်မိမိ၏ စာ တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ နှင့် အခြားဥရောပ နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖြစ်ရပ်များကြောင့် ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အသင်တို့ အားလုံး နှင့် အတူတိုက်ရိုက် စကား ပြောဆိုဖို့ အစီအစဉ်လုပ်ရတာ ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။
ရဲဟ်ဗရ် အင်ကေလာဗ်၏ စာ
အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ နာမတော်ဖြင့် ဦးစွာ အစပြုပါသည်။ထိုအရှင် မြတ်သည် ရဲဟ်မန် နှင့် ရဟီးမ် အရှင် ဖြစ်တော်မူ၏။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များ နှင့်အခြား အချို့ အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖြစ်ရပ် များ ကြောင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အသင်တို့အားလုံးနှင့်အတူ တိုက်ရိုက်စကားပြောလိုပါတယ်၊ကျွန်တော်အနေဖြင့် အသင်တို့လူငယ်၊ လူရွယ်တို့ကိုရည်ညွန်းပြောမည်ဖြစ်ပါတယ်၊ပြောရသည့် အကြောင်းကလည်း အသင်တို့၏ မိဘနှစ်ပါးကို မျက်ကွယ်ပြုသည့် အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး၊တနည်းအားဖြင့် အသင်တို့၏မြေနှင့်လူမျိုး၏အနာဂတ် ဟာအသင်တို့ လက်ထဲမှာ ရှိနေတာကို မြင်နေလို့ပါ၊ပြီးတော့ အသင်တို့ နှလုံးသားနှင့်စိတ် တွေဟာ ဖြစ်ရပ်အမှန်တကယ် ကိုနားလည်လိုနိုင်ဖို့ လှုပ်ရှားနေပြီး ၊အလွန်တရာနိုးကြားနေကြသည်ဆိုသည့် အချက်ကို ခံစားရလိုဖြစ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်ရေးသား သီးကုံးသည့် စာဟာအသင် တို့၏ နိုင်ငံရေးသမားများ၊အစိုးရ၊အရာရှိများကို ရည်ညွန်း ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊အကြောင်းမှာ၎င်းတို့ဟာနိုင်ငံရေး လမ်း ကြောင်းကို တမင်တကာ မှန်ကန်မှု နှင့် အမှန်စကား နှင့်ကွဲအောင် လုပ်နေသည် ကိုကျွန်တော် နားလည် သိရှိ နေသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် အသင်တို့ နှင့် အစ္စလာမ် အကြောင်း ပြောဖို့ ဖြစ်ပါသည်၊အထူးသဖြင့် အသင်တို့ ရှေ့ မှောက်တွင် တင်ဆက်ပြသနေသည့် အစ္စလာမ် ဓာတ်ပုံ နှင့်ပုံရိပ်အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ် ၊ ပြီးခဲ့ရာစု ၂ခုမှစပြီး ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုပျက်ပြီးနောက် ဤကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သည့် သာသနာ (အစ္စလာမ့် ) ကို ကြောက်မက်ဖွယ်ရန်သူ အဖြစ် တင်ဆက် ရန် အလွန်အမင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်၊ကြောက်စိတ် နှင့်မုန်းတီးစိတ်ကို နိုးကြားတက်ကြွအောင် ပြုပြီး ၎င်းမှအကျိုး အမြတ်ထုတ်ယူခြင်းဆိုတာ နဖူးစာကံဆိုးစွာ ဖြင့် အနောက်တိုင်းနိုင်ငံရေးလောက ၏ သမိုင်းမှာ အရင်ကတည်းက ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဤနေရာမှာအနောက်တိုင်းလူမျိုးများကို ယနေ့တိုင် နိုးဆော်သတိပေးနေသည့် ကြောက်ခြင်း အမျိုးမျိုးကို တင်ပြဖို့ မရည်ရွယ်ပါဘူး ၊ အသင်တို့ကိုယ်တိုင် သမိုင်းကို အနည်းငယ် စေ့စပ်ချိန်ကိုက်ဝေဖန်မှု အနည်းငယ်ဖြင့် လေ့လာမည်ဆိုလျှင် လက်ရှိသမိုင်းအမြင်အရ ကမ္ဘာလူမျိုးစု အသီးသီး ပြီးနောက် ယဉ်ကျေးမှု များ နှင့် ဆက်နွယ်ပြီး အနောက်တိုင်း အာဏာရှင်များမှ မမှန်မကန်လုပ်ထားမှု ၎င်းတို့၏ ကောက်ကျစ်လှည့်ဖျားမှု ကိုရှုံ့ ချမှုရှိနေသည့် ရလာဒ်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဥရောပ နှင့် အမေရိကန်သမိုင်းမှာ ကျွန်ရောင်းဝယ်မှုစနစ်ဟာ ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ်၊ဧကရာဇ် ကာလများကြောင့်ရှက်စရာ အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်၊အသွေးအရောင်မျိုးစုံသည့်လူသားမျိုး ဆက်များ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူများ အပေါ် ရက်စက်ယုတ်မာမှုများပြုခဲ့တာဟာ နောင်တယူစရာ ဖြစ်နေပါတယ်၊ အသင်တို့၏ သုတေသီများ ၊သမိုင်းဆရာများ အနေဖြင့် မဇ်ဟဗ်ဘီ အမည်ဖြင့် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်နှင့် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အကြား သွေးထွက်သံယို ဖြစ်ပွားခဲ့မှု ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွက် လူမျိုးစု အစွဲအလန်းများဖြင့် သတ်ဖြတ်မှု ကို တင်ပြရန်အတွက်ပင် ရှက်နေကြပါတယ်။
ဤကိစ္စ ဟာသူနေရာနှင့်သူ ရှင်းလင်းတင်ပြသင့်ပါတယ်၊ဤမာတိကာ အရှည် ကြီးကို အသင်တို့ ရှေ့ တင်ပြခြင်း ဟာ သမိုင်းကို နှိပ်ကွပ်ကိုရှုံ့ချလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး၊တနည်းအားဖြင့် အသင်တို့ကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာကြောင့်ပါ၊(မေတ္တာရပ်ခံချင်) တာက မိမိတို့၏ ပွင့်လင်းမြင်သာ နှလုံးသားပိုင်ရှင်များ ကိုမေးကြည့်ပါ၊ ဘယ်အတွက်ကြောင့် အနောက်တိုင်း သာမာန် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နှလုံးသားဟာဆယ်နှစ်ကျော်မှ သို့မဟုတ်ရာစု တစ်ခုကျော်အထိ နောက်ကျပြီး နိုးကြားရပါသလဲ ?ဆိုတာပါ၊သာမန် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ စိစစ်၊တည်းဖြတ်မှု ဟာ လက်ရှိပြဿနာ များ မှာ မရှိဘဲ အတိတ်ကကိစ္စများ အတွက် ဖြစ်နေရတာလဲ ? အလွန်တရာအရေးကြီး လှသည့် အစ္စလာမ်မီအမြင်များ၊အစ္စလာမ်မီယဉ်ကျေးမှုများကိုသာမန် အတိုင်းအတာအထိ သိရှိနားလည်မှုကို ပိတ်ပင်ထား ရပါသနည်း ?
ကျွန်တော် ဒုတိယ မေတ္တာရပ်ခံလိုတာကတော့ အဆိပ်လူး၊လုပ်ကြံထားသည့်အစီအစဉ်များ၊အကျိုးယုတ်စေသည့် ဘက်လိုက်မှုများဆိုသည့် မုန်တိုင်းကို ရင်ဆိုင်ရန်ဤသာသနာ(အစ္စလာမ်) နှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုက်ရိုက် ၊တဆင့်ခံ မပါဘဲ သိရှိနားလည်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သည့် အသိဥာဏ်ရဲ့၏ အနည်းဆုံးတောင်းဆို မှုကလည်း အသင်ကိုကြောက်ဖို့နှင့်မုန်းဖို့ လုပ်နေသည့်အရာ ကို သိအောင်လုပ်ဖို့ပါဘဲ၊ထိုအရာဟာ ဘာလဲ ? သူရဲ့ သဘာဝကဘာလဲ ? အသင်တို့ အစ္စလာမ် ဘာသာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်၏ အမြင်သုံးသပ်မှု နှင့် အခြားသူများ၏ အမြင်များကို လက်ခံအတည်ပြုပါလို့ အပူတပြင်း မပြောပါဘူး၊သို့သော် လည်းပဲ စစ်မှန်သည့် အမှန်တရား ကိုလက်ခံသည့် ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ ညစ်ညမ်းနေသည့်ရည်ရွယ်ချက်များ ကို အသင်တို့ထံရောက်ဖို့ ခွင့်မပေးဖို့ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ပုံသွင်းထားသည့်(ကြေးစား) သောင်းကြမ်းသူ အဖျက်သမားများကို အစ္စလာမ် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ပြစားပြီးတင်ပြနေမှု ကိုလည်း ခွင့်မပြုမိပါစေနှင့် ၊အစ္စလာမ် သာသနာတော်ကို ၎င်း၏ ပင်မအရင်းအမြစ်အစစ်များ မှတဆင့် သိရှိနားလည် အောင်လုပ်ပါ၊ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် နှင့် မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ၏ ဘဝတည်ဆောက်မှု၏ မီးမောင်း ထိုးပြမှု အောက်မှာ အစ္စလာမ်ကို နားလည်အောင်လုပ်ပါ ၊ အသင်တို့ အနေဖြင့် ယခုအချိန်အထိ မွတ်စလင်တို့၏ ကျမ်းတော် မြတ် ကုရ်အာန်ကို တိုက်ရိုက် လေ့လာမှု ပြုပြီးပါသလားလို့ ကျွန်တော်မေးလိုပါတယ်? မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ၏ သွန်သင် ဆုံးမမှုများ ၊ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ)၏ မနုဿလူသားနှင့် စာရိတ္တဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများကို လေ့လာ မှတ်သားပြီးပီလား ?အစ္စလာမ် သာသနာ အကြောင်းကို ရုပ်မြင်သံကြားဌာန ၊သတင်းဌာနများမှ အပ အခြားနေရာများ မှကော်လေ့လာပြီးပီလား? တခါတလေကော်မိမိကိုယ်မိမိ နောက်ဆုံးဘာကြောင့် အစ္စလာမ် သာသနာဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဘယ်စွမ်းအားကို အခြေခံပြီး ရာစုနှစ်များစွာ ကမ္ဘာလောကကြီး၏ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အကြီးမားဆုံးပညာရေး ၊တွေးခေါ်ရေးကို ပြုစုပျိုးထောင်နေတယ် ၊ အကြီးမားဆုံး အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ ၊အသိပညာရှင်များ ကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့ တယ်ဆိုတာ ကို မေးမြန်းဖူးပါသလား ?
စော်ကားပုတ်ခတ်ခြင်း၊ အဆိပ်သင့်စေသည့် ကာတွန်း ကို တင်ပြပြီး(အစ္စလာမ်မုန်းတီး)သူများ အနေဖြင့် စစ်မှန်သည့် အမှန်တရား နှင့်အသင်တို့၏ စိတ်ခံစားမှုအကြားတတိုင်းထောင်ခြင်း ၊ လွပ်လပ်စွာ(တရားလက်လွတ် မဖြစ်ဘဲ ) ဆုံးဖြတ်ခြင်းအခွင့်အရေးကိုကိုဆုံးရှုံးဖို့ မပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်၊ယနေ့ခေတ်ဟာ ဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများဖြစ် ပထဝီ နယ်နမိတ် များကို ချိုး နိုင်ပြီးဖြစ်ရာ မိမိ၏ အသိဥာဏ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် နယ်နမိတ်အတုအယောင်များတွက် မလွှင့်နေရန် လိုပါတယ်၊မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ တစ်ကိုယ်တည်းတစ်ဦးတည်း စနစ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ကွက်လပ်များ (ဟာကွက်ပျော့ကွက်များ) ဖြည့်စီးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ၊ သို့သော် အသင်တို့ အထဲမှ ယောက်တိုင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် အနီးအနားမှ သူများကို အမှန်တရား အစစ်အမှန်သိအောင် ပြုလုပ်ပေး မည်ဆို သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကွက်လပ်များကို ဖြည့်စီးနိုင်မည့်အတွေးအခေါ် နှင့် တရားမျှတမှု ဆိူသည့် တံတားလေးကို မဖြစ်မနေ တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ် နှင့် အသင်တို့ လူငယ်လူရွယ်များ အကြား ဟာနေသည့် ကွက်လပ် အတွက် ပထမကတည်းက အစီအစဉ်ပြုထား ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ဧကန်မုချ မနှစ်မြို့ စရာဖြစ်ပါတယ် ၊သို့သော် မေးခွန်း အသစ်များ ကို အသင်တို့၏ စပ်စုလေ့လာ လိုသည့် စိတ်နှင့် သုတေသီစိတ်တို့ အတွက် ဖန်တီး ပါ၊ဤမေးခွန်းများအတွက် အဖြေထွက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု သည် အမှန်တရားများ ထင်ပေါ် ရှင်းလင်းလာရန် အတွက် အခွင့်အခါကို ဖြစ်စေမည် ဖြစ်ပါတယ်၊ ဤ အတွက် ကြောင့် အစ္စလာမ်သာသနာကို မှန်ကန်စွာ နားလည် သဘောပေါက်မှု နှင့်အကျိုးယုတ်ဖျက်စီးစေသည့် နားလည်မှုမပါဘဲ သိရှိခွင့်ရမည့် ဤအခွင့်အရေး ကိုလက်လွတ်အဆုံးအရှုံးမခံကြပါနှင့် ၊ဤသို့ပြုမည်ဆိုလျှင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တာ ကတော့ အသင်တို့၏ တာဝန်သိတတ်သည့် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှု၏ မင်္ဂလာကြောင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အတွက် အနောက်နိုင်ငံများ ၏အစ္စလာမ်အပေါ် ဆက်ဆံမှုသမိုင်း(တဖက်သိပ်နိုင်မှု) ကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပေါ်မှု နည်းနည်း နှင့် အသိတရားပါသည့်လွယ်ကူမှု ဖြင့်သီးကုံးရေးသားစေလိုပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက် ၊ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၅